Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 18, 2020 00: 55 Awekho amazwana
Lapho sikhuluma ngabanye, sivame ukukhathazeka ngezahlulelo zenani kanye nokugxeka okugxekayo. Noma kunjalo akekho umuntu olungele noma yini. Wonke umuntu noma wonke umuntu ubala noma yini, noma ngabe unamaphutha muni, ngoba wonke umuntu unabo.
Ngakho-ke, ungayeka yini ukukhathazeka ngemibono yabanye abantu bese uqala ukubheka indlela ocabanga ngayo ngawe!
Uyini umbono wakho ngawe? Yini esingazange sizwe kuthiwa: "Abantu bayahlanya, abantu babi, abantu bashayela ngokushesha, abantu abathandi abantu", kodwa kaningi kunokuba sikhohlwe ukuthi siyingxenye ebalulekile yalaba bantu. Ukubona kwakho abanye akuhambisani nendlela oziqonda ngayo.
Thola izimangaliso zomkhosi we-Ilê Aiyê eBrazil: Umncintiswano wobuhle obuMnyama / wase-Afrika, "Ama-Aesthetics amnyama / omnyama, umculo, imidanso, izinkolelo, amasiko, izindlovukazi ze-ebony, onkulunkulukazi, onkulunkulu abamnyama / base-Afrika, amaqhawe namaqhawekazi", Indaba yangempela yabansundu / ama-Afrika amelana nengcindezelo yobugqila… (VIDEO)
I-Oct21 09: 37